Filipina: Nitory bilaogera ny mpikambana iray ao amin’ny kabinetra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Mey 2018 4:44 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Español, Filipino, English
Miatrika fitoriana noho ny fanalam-baraka tamin'ny lahatsoratra navoakany tamin'ny volana oktobra i Ella Ganda, bilaogera. Nilaza i Ella fa ny entana fanampiana ho an'ireo tra-boinan'ny rivo-doza dia raofina ao amin'ny trano fitehirizan'ny governemanta ao amin'ny Departemantan'ny Fiahiana Ara-tsosialy sy ny Fampandrosoana (DSWD).
Namely an'i Filipina ny rivodoza trôpikaly mahery vaika tamin'ny Septambra lasa teo ka olona atsasa-tapitrisa tao amin'ny nosy Luzon fotsiny ohatra no nafindra toerana. Ny DSWD no masoivohon'ny governemanta miandraikitra ny fandrindrana ny ezaka fanampiana manerana ny firenena. Namaly ny fangatahan'ny governemanta hisian'ny mpirotsaka an-tsitrapo bebe kokoa i Ella ka nandeha tany amin'ny trano fitehirizana DSWD mba hanampy amin'ny famonosana indray ny entana fanampiana.
Nalain'ny fampahalalam-baovao mahazatra ny zavatra navoakan'i Ella. Nolavin'ny manam-pahefana DSWD ny filazana fa mandraoka ireo entana fanampiana ny sampana saingy niaiky izy ireo fa tsy ampy mpirotsaka an-tsitrapo. Namoaka ity fanambarana ity ho setrin'ny tatitra bilaogy navoakan'i Ella ny Sekreteran'ny DSWD Esperanza Cabral (Sekreteran'ny Departemantan'ny Fahasalamana ankehitriny).
Tianay ny hanome toky anareo rehetra fa ho tonga any amin'ireo tokony iantefany ireo entana fanampiana rehefa ilaina izy ireo ary ho ampiasaina ihany amin'ny fanampiana azy ireo. Na izany aza, tsy mivoaka amin'ny fotoana iray avokoa ireo entana fanampiana ary ny trano fitehirizana foana dia tsy porofo fa nampiasaina araka ny tokony izy ireo entana, tahaka izany koa ny trano fitehirizana feno entana, tsy porofo fa raofina ao ny entana.
Telo volana taorian'ny nitaterana ny zavatra hitany tao amin'ny tobin'ny DSWD, nampangain'ny Biraom-pirenena misahana ny Famotoroana (NBI) ho nanala-baraka i Ella. Izany dia noho ny nangatahan'ny Sekretera Cabral izay nilaza fa nolotoin'i Ella ny lazany. Niezaka namantatra ny tena anaran'i Ella ny Sekretera Cabral sy ny NBI. Tian'izy ireo hamaly ny fiampangana azy i Ella ary nampandalovana polygrafika (fitaovam-pizahana lainga).
Tsy vao voalohany no nisy bilaogera voampanga ho nanao fanalam-baraka tao Filipina. Saingy sambany kosa ny mpikambana ao amin'ny kabinetra, miara-miasa amin'ny NBI, no niampanga bilaogera tsy mitonona anarana tamin'ny fiampangana fanalam-baraka.
Ahoana ny fanehoan-kevitr'ireo bilaogera Filipiana? Manohana an'i Ella ny ankamaroany.
Mihevitra ny FOO Law and Economics fa marefo ny raharaha
Te ho hirotsaka an-tsitrapo amin'ny fahatsapana iraisan'ny maro aho. Mino aho fa ny lahatsoratra navoakan'i Ella dia ao anatin'ny famaritana tanteraka ny “fanehoan-kevitra ara-drariny” amin'ny “jurisprudence” (fomba fandraisanany lalàna) momba ny fanalam-baraka. Ao amin'ny (fomba fandraisanany lalàna), ny fanehoan-kevitra ara-drariny dia fomba fiarovana ampy raha lohahevitra mahaliana ny vahoaka ny lohahevitra resahana momba ny fanalam-baraka.
Resurgence 2.0 mampitandrina fa ny fitoriana fanalam-baraka dia misy fiantraikany ratsy eo amin'ny bilaogera.
Nahita ny bilaogy nandritra ny lazany aho. Tsy misy zavatra fanalam-baraka ao anatin'izany. Mitsangana tsy mahazo tombony ilay bilaogera – ankoatra ny laza azon'ny bilaogy vokatry ny fitoriana. Raha nisy zavatra momba an'i Ella nandritra izany fotoana izany, dia sahirana kokoa momba ireo olona noana, tsy manan-kialofana sy tsy misy akanjo sy toa tsy raharahian'ny governemanta izy.
Miteraka fiantraikany mampangotsoka eo amin'ireo bilaogera izany. Ny blaogy – sy ny tambajotra sosialy – araka ny fantatsika ankehitriny, no hoavin'ny media. Mety tsy ara-mpomba ofisialy toy ny fanontam-pirinty na televiziona izy, saingy hamafisiko fa io no loharanom-baovao haingana indrindra sy azo antoka kokoa ankehitriny
Carlo's Think Pieces manizingizina fa: “Tsy fanalam-baraka izany, fa fahalalaham-pitenenana.”
Bilaogin'olom-pirenena manahy noho ireo entana fanampiana izay toa tsy nozaraina haingana ho an'ireo niharam-boina tamin'ny rivo-doza no hitako. Tsy nisy na inona na inona tao anatin'ity lahatsoratra blaogy ity nilaza fa “lò” ireo entana fanampiana – ny teny nampiasainy dia “inaalikabok” (midika hoe “manangona vovoka”). Nilaza ny tsy fisian'ny mpilatsaka an-tsitrapo hanao ny asa famonosana izy, ary nanolo-kevitra mihitsy aza fa afaka manampy amin'izany asa izany ny fikambanana ONG na ny miaramila. Tsy niampanga velively ny Sekretera na ny DSWD ho manao kolikoly izy.
Heveriko fa manararaotra tafahoatra ny fahefany ny Sekretera Cabral ary miavonavona, amin'ny fiezahana hampangina an'i Ella sy ny bilaoginy. Tsy mendrika tanteraka ny fitoriana azy amin'ny fanalam-baraka. Ny bilaogin'i Ella dia nanambara ny marina, ary natao tsy misy fikasana ratsy izany. Tsy fanalam-baraka izany, fa fahalalaham-pitenenana.
Barrio Siete nizara hevitra mitovy amin'izany:
Voalohany, ny lahatsoratra bilaogy voalaza, araka izay hitantsika amin'ny ankamaroan'ny bilaogy, dia resaka hevitra fotsiny. Raha misy olona manao fanambarana mifanohitra amin'ny zava-misy araka ny filazan'i Cabral, dia tsy voatery ho fanalam-baraka izany. Amin'ny lafiny iray, ny fanambarana dia azo raisina ho fanehoana ny zava-misy na hevitra miankina amin'ny hoe mety mahafantatra ny zava-misy marina ve ny olona iray manao fanambarana toy izany.
Maneho hevitra mikasika ny raharaha fanalam-baraka hanenjehana an'i Ella, mandrisika ireo bilaogera i Technograph mba ho vonona hitahiry ny fanambaran'izy ireo ao amin'ny blaogin'izy ireo, ary hiala tsiny raha voaporofo fa diso
Ho ahy manokana, hitako fa sarotra inoana ankehitriny ny fiampangana an'i “Ella Rose”. Raha tokony hino ny NBI, dia tsy nanao dingana mihitsy izy mba hanohanana ny fanambarany, anisan'izany ny fangatahana “fanadihadiana avy amin'ny Biraon'ny Mpanelanelana ny vahoaka amin'ny mpitondra na ny sampan-draharahan'ny fampiharana lalàna.” Na miady amin'ny fiampangana na tsia i “Ella Rose”, tsarovy ry bilaogera, mivonòna hitahiry izay zavatra lazainao, ary miala tsiny raha diso!
Mpanao gazety Jigs Arquiza manoro hevitra an'i Ella mba hiatrika ny fiampangàna.
Ho an'ny ambiny rehetra izay tsy mahatakatra tsara ny hevitro ary mihevitra fa tsy ara-drariny no nanaovana an'i Ella: zonao ny manohana an'i ella. Tsy miteny aho fa diso daholo ianareo rehetra. Ny hany lazaiko dia hoe misy foana ny lafiny iray amin'ny tantara. Tsy namoaka ny zava-misy rehetra i ella, tsy niezaka hahazo fanazavana sasantsasany, tsy nibilaogy tompon'andraikitra, ary miafina ao ambadiky ny fiarovana ny “fahalalaham-pitenenana” ankehitriny.
maro ireo bilaogera mihevitra fa afaka miteny na inona na inona ao amin'ny blaoginy izy ireo satria afaka mitoetra tsy misy anarana. ary araka ny nolazaiko, raha mahatsapa i ella fa tsy misy fikasana ratsy ny zavatra navoakany, dia tokony hivoaka sy hiatrika ny fiampangana izy
Izany no zavatra tsy fantatry ny ankamaroan'ny bilaogera, fa rehefa maneho ny eritreritrao ampahibemaso ianao, dia tsy manokana intsony izany, fa kosa, lasa fanamarihana izay miteraka setriny.
Izany no nitranga. Namoaka lahatsoratra i ella, tezitra i cabral, tokony hiatrika ny vokany i ella. Na izany na tsy izany, miankina amin'i cabral no manaporofo fa diso, sa tsy izany? Ka inona no atahoran'i ella?